Ny sidina mpandeha iraisampirenena voalohany dia mivoaka ny seranam-piaramanidina Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Ny sidina mpandeha iraisampirenena voalohany dia mivoaka ny seranam-piaramanidina Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny sidina mpandeha iraisampirenena voalohany dia miainga avy amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Ny ekipa teknikan'i Qatari sy Tiorka dia nanampy tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiasan'ny seranam-piaramanidina, izay simba nandritra ny famoahana korontana an'aliny olona maro hanatratra ny fe-potoana fisintonana ny tafika amerikana tamin'ny 31 aogositra.
Qatar Airways dia manidina mpandeha iraisampirenena avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul.
Ny tompon'andraikitra Qatari dia mihevitra ny fiasan'ny seranam-piaramanidina Kabul.
Taliban dia mamela ny vahiny handao an'i Afghanistan amin'ny sidina ara-barotra.
Miaraka amin'ny tompon'andraikitra ambony Qatari iray manambara fa ny seranam-piaramanidin'i Kabul dia "mihazakazaka tanteraka", ny sidina mpandeha iraisampirenena voalohany dia niainga avy tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamid Karzai androany.
Ity no sidina ara-barotra voalohany niainga avy tao HKIA hatramin'ny namaranan'ny firenena Andrefana ny sidina famindrana azy ireo avy any Afghanistan herinandro sy tapany lasa izay.
Raha ny filazan'i Mutlaq al-Qahtani, irak'i Qatar manokana any Afghanistan, izay niresaka tamin'ny tarmac androany, ny seranam-piara-manidina dia "sahabo ho 90% vonona hiasa", saingy kasaina miadana miandalana ny fisokafany.
“Andro manan-tantara amin'ny tantaran'i Afghanistan ity satria miasa tanteraka ny seranam-piaramanidina Kabul. Niatrika fanamby goavana izahay… saingy afaka milaza izao izahay fa mety amin'ny fitetezana ny seranam-piaramanidina, ”hoy i al-Qahtani.
The Qatar Airways efa tonga ny fiaramanidina Seranam-piaramanidina Kabul mialoha ny alakamisy nitondra fanampiana. Niainga ho any Doha, Qatar niaraka tamin'ny mpandeha izy, anisan'izany ny vondron'olona vahiny marobe.
"Antsoy hoe inona no tadiavinao, charter na sidina ara-barotra, samy manana tapakila sy pasiterany ny tsirairay," hoy i al-Qahtani, izay nilaza fa sidina mahazatra io. Nilaza izy fa ny sidina iray dia tokony hiala ny zoma. "Manantena aho fa hanjary ara-dalàna ny fiainana any Afghanistan," hoy izy nanampy.
Nilaza ny tompon'andraikitra Qatari teo aloha fa ny governemanta Taliban ao Afghanistan dia hamela ny Tandrefana eo anelanelan'ny 100 sy 150, ao anatin'izany ny Amerikanina, hiala ao Kabul amin'ny ora ho avy.
Ny mpitondra tenin'ny Taliban, Zabihullah Mujahid dia nisaotra an'i Qatar tamin'ny fanampiany tamin'ny fanaovana ny seranam-piaramanidina ho fanampiana an'i Afghanistan.
"Amin'ny ho avy tsy ho ela, ny seranam-piaramanidina dia ho vonona amin'ny karazana sidina rehetra, anisan'izany ny sidina ara-barotra," hoy izy, nijoro teo akaikin'ny tompon'andraikitra Qatari teo amin'ny tarmac aéroport.